असलकले तपाईंलाई स्वाइप गेस्चर प्रयोग गरेर आईफोन लक गर्न दिन्छ आईफोन समाचार
वास्तवमा हामीसँग छ जेल एप्पल मोबाइल उपकरणहरू, आईओएस .7.1.2.१.२ को अपरेटिंग सिस्टमको नयाँ संस्करणको लागि उपलब्ध छ, र भर्खरको ट्वीकको लागि धन्यवाद जुन साइडियामा देखा परेको छ, धेरै प्रयोगकर्ताहरू जसको टुक्रिएको लक बटनको साथ आईफोन थियो भाग्यमा छन्। aslock नयाँ चिमोट हो जुन प्रयोगकर्तालाई कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ स्वाइप इशारा खोज्न औंला रोशनी उपकरण लकको रूपमा। यसको अपरेशन एकदम सरल छ, यदि हामी स्प्रिंगबोर्डमा हाम्रो औंला तल स्लाइड गर्छौं भने असलक चिमटाको साथ हामी स्वतः आईफोन लक हुनेछ.
उपकरण लक गर्नु यसको मुख्य कार्य हो, तर यसले हामीलाई अनुप्रयोगहरू बीच स्विच गर्न इसारा प्रयोग गर्न पनि अनुमति दिनेछ मानौं कि हामी multitasking एक पछि अर्को दुई पटक होम बटन थिच्दै। मल्टीटास्किंग प्रकार्यका लागि हामी हाम्रो औंला तल र माथि स्लाइड गर्नेछौं र अनुप्रयोगहरू जुन हामीले पृष्ठभूमिमा खोल्छौं जस्तो देखिन्छ कि हामीले संलग्न गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ।
यसको कन्फिगरेसन धेरै सरल छ र तपाईं सक्रिय र निष्क्रिय गर्न सक्नुहुनेछ सेटिंग्स IOS को। सेटिंग्स भित्र हामी पनि गर्न सक्छौं इशारा प्रतिक्रिया समय सेट गर्नुहोस् स्पटलाइट खोज प्रकार्य सुरक्षित गर्नका साथै हाम्रो स्वाद अनुसार। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसक्यौं, यसको मुख्य उपयोगिता तपाईंलाई उपकरण अनलक गर्न र मल्टिटास्किंगमा पहुँच गर्न अनुमति दिनमा निहित छ यदि हामीसँग कुनै भाँचिएको आईफोन बटनहरू छन्, तर यसले सेवा गर्दछ ती कार्यहरू अधिक छिटो पहुँच गर्नुहोस् र होम बटन र लक बटन को उपयोग कम गर्नुहोस्। यदि तपाईं जेलब्रेकको साथ तपाईंको उपकरणमा कार्यक्षमता राख्न चाहनुहुन्छ जुन असलकले तपाईंलाई यो भण्डारबाट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ ठुलो हाकीम को मूल्य मा 0,99 डलर.
तपाईं असलोकको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? के तपाईंले प्रयास गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » एस्लॉक: ट्वीक जसले स्पटलाइट इशारा (साइडिया) को साथ आईफोन लक गर्न अनुमति दिन्छ।
इशाराको प्रतिक्रिया समय कन्फिगर गर्ने तथ्य बाहेक, एक्टिभेटरसँग गर्न नसकिने केहि पनि छैन जुन नि: शुल्क पनि छ, र पछिल्लो बेटा आईओएस on.१.२ मा पंगु जेलब्रेकको साथ मेरो लागि उत्तम रूपमा काम गर्दछ।
केभिनकुपरलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाई किन चाहानुहुन्छ, सक्रियकर्ता भएकोले र तपाईले चाहनुभएको इशाराको साथ समान गर्न सक्षम हुदै हुनुहुन्छ…।
जे भए पनि ..
IOS ((जेलब्रेक) मा आईओएस inte ईन्ट्र्याक्टिव सूचनाहरू प्रयास गर्नुहोस्।